Makwikwi anohwina mubairo weGerman makwikwi akarongwa nealmancax uye ayo anogona kungopindwa nealmancax forum nhengo, enderera nekukasira kuzere.Vatori vechikamu mumakwikwi eAlmancax, apo dzimwe nguva mubairo wemari, dzimwe nguva dzidzo yeGerman inogadza mubairo, dzimwe nguva mukana wekudzikisira mumhando uye makosi emitauro akavimbika anopiwa, ese ari maviri anovandudza yavo yeGerman uye vanodzidza ruzivo rutsva.
KUGADZIRWA KWAKASIMBWA KUTI KUDZIDZISWA KWAKASIMBEDZWA KUNOPEDZWA NEZVIMWE ZVICHATONGWA ZVICHASIMBWA NEZVAKAITIKA COMPETITION ITSVA.
Inonzi kunakidzwa nekudzidza!
Iwe unogona kubatana uye kutora mubayiro kuburikidza nekutevera manzwi eAlmanx.
Mumakwikwi ekuziva ruzivo rwekupedzisira kweGermany mwedzi wekupedzisira, nhengo yedu Fuk-18 yakakunda mubayiro wokutanga uye yakaratidzwa neGermany dzidzo yakagadzirwa uye mishandisirwo emagetsi yemagetsi mu6.
Iwe unogona kutevera zviziviso zvemashoko e-almanx pamba redu rekumba uye peji peji peji.
Mhemberero yatakaronga ingave yakaguma, asi usambovhara, kunyange kana yakaguma, iwe unogona kugara uchitora mumibvunzo yedu.
Sangano reAlmanx rinokumbira iwe kubudirira.
Kwete: Isu tinogara tichiedza kukupa ruzivo rwezvino. Ichi chinyorwa chauri kuverenga chakatanga kunyorwa anenge makore maviri apfuura, muna Nyamavhuvhu 2, 09, uye chinyorwa ichi chakapedzisirwa kuvandudzwa muna Zvita 2019, 14.
Almancax maforamu, Germany maforamu
Applications Course yeGermany yeStart Board
German Talking Guide
Great Campaign muGerman Education Education Set
ChiGerman Ruzivo Rwomukati Rakaitirwa muSivas
Tags: German quiz, German quiz, award-winning quiz